Madaxweynaha dalka oo la kulmay madax u kuur galeysa sidii ciidanka AMISOM loogu bedeli lahaa ciidamo hoos taga… | warsugansomaliya.wordpress.com
Madaxweynaha dalka oo la kulmay madax u kuur galeysa sidii ciidanka AMISOM loogu bedeli lahaa ciidamo hoos taga…
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamud ayaa manta xafiiskiisa ku qaabilay guddi ka wada socda Qaramada Midoobey iyo Midowga Africa oo howshoodu tahay inay qiimeyn ku sameeyaan sidii ciidamo Qaramada Midoobey ka socda oo nabad illaalin ah Soomaaliya loo keeni lahaa.
Madaxweynaha waxaa kulankan ku wehliyey Wasiirka Gaashandhiga, Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibedda, iyo la taliyeyaasha Xafiiska Madaxweynaha. Dhanka kale Wafdiga labada dhinac ka socda waxaa ku wehliyey kulanka Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Afrika iyo ku xigeenka Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobey iyo Taliyaha Ciidanka AMISOM.
Walid Musse oo u hadlay guddiga labada dhinac ah ayaa warbixin siiyey Madaxweynaha oo sheegey in guddigu ay booqan doonaan gobollada Bay, Kismaayo, Beledweyn iyo Jowhar si ay qiimeyn ugu soo sameeyaan horumarka ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda, caqabadaha jira iyo sidii Qaramada Midoobey ay saacidi lahaayeen ciidanka Soomaaliyeed oo loogu heli lahaa tasiilaadkii ay ku howlgali lahaayeen. Walid Musse ayaa sheegey in Golaha Ammaanka ee QM uu ka sugayo warbixin ku aadan xaaladda dhabta ah ee ka jirta Soomaaliya si ciidamo nabad-illaalin ah oo ka socda QM loo keeni lahaa Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa aad iyo aad uga mahadceliyey Qaramada Midoobey iyo Midowga Africa dadaalkooda ku wajahan sidii Soomaaliya ay u nqon laheyd waddan nabad ah oo deggen. Madaxweynaha ayaa yiri “Waxaan soo dhoweyneynaa wadatashiyada joogtada ah ee QM iyo Midowga Africa ay la yeelanayaan Dowladda Soomaaliya, Dowladdana waxay diyaar idiin la tahay sidii aad howlaha aad u timaadeen aad u gudan laheydeen. Kooxaha Al-Shabaab wallow laga adkaaday haddana weli waxey qatar ku yihiin ammaanka dalka oo ay doonayaan inay caalamka tusaan in dalku uusan nabad aheyn.
Sidoo kale ciidanka Dowladdu waa diyaar oo tababar ku filan wey qaateen, laakin caqabado badan ayaa jira sida tasiilaadkii iyo dhaqaalihii ay ku howlgali lahaayeen iyo xaquuqdooda aasaasiga ah. Dowladdu wey soo dhoweyneysaa qorshaha QM ee ah in la taageero ciidanka Dowladda si ay u gutaan howlahooda muhiimka ah.”
Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Africa oo isna ka hadlay goobta ayaa sheegey inuu ku faraxsanyahay horumarka ballaaran oo ay dowladdu sameysey isla markaana sheegey in Midowga Africa ay marwalba garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya.
Dowlada Mareykanka oo ka hadashay heshiiska taariikhiga ah ee dowladda federaalka iyo Jubba dhex maray
Guddi ka Socda Ururka EU oo Muqdisho Tagay
← C/Raxmaan Faroole oo fadeexo Culus raacday loona diiday in uu ka qeyb galo Xafladii Gaba-gabada ee Shirkii Adis Ababa
Faah Faahin Qodobadii ay Maanta kuwada Heshiiyeen Dowlada Somalia iyo Maamulka Jubaland(Daawo Sawirada) →